Nuevos modelos de Apple Watch se dejan ver en la beta XNUMX de iOS XNUMX | Soy de Mac
Vakomana vanobva kuCupertino vakatanga michina ye beta nezuro masikati (nguva yeSpanish) ndokuparura yechipiri beta ya tEse masisitimu anoshanda iyo kambani iri kushanda pairi uye izvo zvichaona mwenje unotevera Gunyana, pamwe panoperera chirevo chekuratidzwa kweiyo nyowani iPhone.
Asi panguva ino, Apple inoenderera ichisunungura mabetas. Kunyangwe iyo beta yechipiri yeIOS 12 yaburitswa makore mashoma apfuura, mune kodhi yatinowana Mareferensi emhando nyowani dzeApple Watch.
Haisi nguva yekutanga kana ichave iri yekupedzisira kodhi yeIOS isu tinowana mareferenzi kune zvimwe zvishandiso zvekambani, Izvo zvakatoitika kare neiyo HomePod uye ikozvino zvinoitika zvakare neApple Watch. Makodhi matsva anowanikwa mune yechipiri beta yeIOS 12 ndeaya: Tarisa 4,1, Tarisa 4,1, Tarisa 4,3 uye Tarisa 4,4. Aya makodhi anoenderana nemhando dzakasiyana dzeApple Watch Series 3.
Tinogona zvakare kuwana mareferenzi kune mamodheru anoenderana nemidziyo mitsva seMTUD2, MTUK2, MTX92 pakati pevamwe. Kuvhurwa kweApple Watch Series 4 kunofungidzirwa kwemwedzi waGunyana, kuvhurwa kunozoenderana pamwe neiyo Plus modhi yeiyo iPhone X pamwe nemutengo wakachipa une LCD skrini, maererano nerunyerekupe rwakasiyana.
Iyo Apple Watch Series 4, sezvo ichi chizvarwa chitsva cheApple Watch chingangodaidzwe, ingadai iine skrini 15% yakakura kupfuura ese apfuura mamodheru, inovhara zvimwe kumberi kwechigadzirwa. Zvekare, uye senguva dzose, mukati mekota yechitatu yegore hazvimbobvumidzwe kumutsiridza zvishandiso zvedu, kunyanya kana tiri kutaura nezve iPhone kana Apple Watch, kunyangwe zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti iyo iPad yakasainirawo Nyamavhuvhu. matsva, saka hazvikurudzirwe kuzvitenga panguva ino yegore, zvikasadaro tinoda kuchengeta modhi chembere a mumwedzi mishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Mhando nyowani dzeApple Watch dzinoonekwa mu beta 2 ye iOS 12
Delete duplicate mumhanzi maalbub paMac neDuplicate Music Cleaner